वयस्कहरू र बच्चाहरूको लागि सुलेख | प्रिन्ट योग्य सुलेख जनरेटर | गठन र अध्ययन
वयस्कहरूको लागि सुलेख
माइट निक्यूसा | | प्रशिक्षण
La वयस्कहरूको लागि सुलेख यो एक शैली पछिको लेखनको कला हो र पूर्ण रूपमा बनाइएको हस्तलेखनको साथ। क्यालिग्राफी स्कूल, समाज र संस्कृतिमा बढ्दै छ। त्यहाँ सुलेखको विभिन्न शैलीहरू छन्। एक विशेषज्ञले ती सबै जान्दछ, सहित कलात्मक सुलेख. पत्र एक धेरै व्यक्तिगत पक्ष हो जुन प्रत्येक व्यक्तिको बारेमा जानकारी प्रदान गर्दछ।
क्यालिग्राफी स्कूलमा सिकेको छ तर घरमा पुन: सुदृढ गर्नु पर्छ। त्यस कारणका लागि दुबै शिक्षक र अभिभावकलाई बिभिन्न सुलेख जनरेटरको ज्ञान हुनुपर्दछ।
1 सुलेख जेनरेटरहरू
1.3 स्रोत बाकस
2 सुलेखको साथ कसरी सुरू गर्ने
3 वयस्क सुलेख कसरी सुधार गर्ने
वयस्क र बच्चाहरु को लागी सुलेख जेनरेटर संग तपाइँ शैली वा फन्ट को आकार परिवर्तन गरेर लेखन मा सुधार गर्न को लागी व्यायाम बनाउन सक्नुहुन्छ। यस तरीकाले, विद्यार्थीहरु र बुढो मानिसहरु प्रतिलिपि गर्न र बिस्तारै प्रविधि सुधार गर्न सक्षम छन्। धेरै, प्रिन्ट गर्न योग्य कलिग्राफीलाई धन्यवाद, तपाईं खरीद गर्नबाट बच्न सक्नुहुन्छ बुकलेट्स वयस्क सुलेखमा विशेष। यस संसाधनको साथ तपाईं पानि र पानाहरू निजीकृत पाठको साथ सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ।
तर यो स्रोत स्कूल उमेर वा प्राथमिक शिक्षा विद्यार्थीहरूको लागि मात्र हुनु हुँदैन। यदि तपाईं वयस्क हुनुहुन्छ, र तपाईंलाई आफ्नो लेखन मनपर्दैन भने, तपाईं निम्न पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ सुलेख जनरेटर। सन्देश याद गर्नुहोस्: "तपाईं केवल लेखेर लेख्न सिक्नुहुन्छ।"
अर्को, हामी वयस्कहरू र तपाईंले प्रयोग गर्न सक्नुहुने बच्चाहरूका लागि केलिग्राफी जेनरेटरहरू प्रस्तुत गर्न जाँदैछौं।
लेख्न सिक्नका लागि उपकरणहरू
Pekigis.com को यस वेबसाइटमा तपाइँ एक साइट पाउन सक्नुहुन्छ जहाँ तपाइँ नि: शुल्क डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ सुलेख व्यायाम दुबै अपरकेस र लोअरकेस अक्षरहरूमा। जो कोही चाहान्छ तपाइँको हस्तलेखन लेख्न वा सुधार गर्न सिक्दै, तपाईंसँग यी लक्ष्यहरू प्राप्त गर्ने मौका छ। थपको रूपमा, तपाई खेलहरू, रing्ग पृष्ठहरू, कथाहरू, परीक्षणहरू र विभिन्न प्रकारका संसाधनहरू पनि पाउन सक्नुहुन्छ।
वेब भनिन्छ mcfree तपाइँलाई सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ वयस्कहरु को लागी सुलेख कार्ड, तर यो पनि बच्चाहरु मा सुलेख सुधार गर्न को लागी। तपाईंले भर्खर pdf मा सुलेख गतिविधिहरू सिर्जना गर्न र प्रिन्ट गर्न एक साधारण फारम भर्नु पर्छ। विभिन्न प्रकारका अक्षरहरू (रेखीय वा डटेड) र लाइनहरू जुन तपाईं प्रति पृष्ठ चाहनुहुन्छ। कुनै श doubt्का बिना, यो एक धेरै चाखलाग्दो स्रोत हो।
En स्रोत बाकस तपाईं पनि एक महान पाउन सक्नुहुन्छ मुद्रण योग्य सुलेख टोकन जनरेटर। धेरै विकल्पहरु बाट छान्नुहोस्: बिन्दु, ग्रिड, फन्ट आकार र पाना उन्मुखीकरण।
वयस्कहरू वा बच्चाहरूको लागि सुलेख व्यायामहरू गर्न यी श्रोतहरूको के तपाईं सोच्नुहुन्छ? तपाईं आफ्नो आवश्यकताहरू अनुसार तपाईंको कार्डहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ वा तपाईंको विद्यार्थीहरूको। तपाईंलाई यी सबै संसाधनहरू कुन सबैभन्दा मन पर्छ?
सुलेखको साथ कसरी सुरू गर्ने
कसरी हस्तलेखन सुन्दर बनाउन? सुलेखन लेखन को लागी एक कलात्मक स्पर्श जोड्छ, किनकि यो शब्दहरु को सौंदर्यशास्त्र को ख्याल राख्छ। लेख्न एक सहज र राम्रो ठाउँमा छनौट गर्नुहोस्। यो महत्त्वपूर्ण छ कि जब तपाईं रेखा बनाउन थाल्नुहुन्छ तपाईंले पानामा कुनै प्रकारको छाया महसुस गर्नुहुन्न। त्यो हो, कार्यक्षेत्र तयार गर्नुहोस्।
स्ट्रोकको सौन्दर्यको माध्यमबाट राम्रोसँग लेख्नको लागि, प्रत्येक अक्षरको आवागमनको ध्यान राख्दै, यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाइँ यस लक्ष्यमा पूर्ण ध्यान दिनुहुन्छ। यस प्रक्रियामा विभिन्न प्रकारका कागजातहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ। अभ्यास सुरु गर्नका लागि उपयुक्त कागज चयन गर्नु राम्रो विचार हो। अवशोषित ढाँचामा यो पछाडि सुधारहरू गर्न सम्भव छैन। एक चिकनी बनावट र एक चिकनी सतह संग एक कागज विशेष गरी उपयुक्त छ। यस्तो ढाँचाले लेखन प्रक्रिया सजिलो बनाउँदछ।
प्रयोग गर्न विभिन्न पेन, मार्कर वा पेन छनौट गर्नुहोस्। जहाँसम्म, त्यहाँ लेख्ने भाँडा छ जुन विशेष रूपमा शुरुआतीहरूको लागि उपयुक्त छ: पेन्सिल। यस सामग्रीको मद्दतले तपाईले सिधा र घुमाउरो लाइनहरु जोडेर अक्षरलाई चाहेको आकृति दिन सक्नुहुन्छ। पातलो वा मोटो रेखा लाई सहि बनाउनको लागि पेन्सिलको टिप्स चाहेको आकृति हुनुपर्दछ। एउटा कथाको रचनात्मक लेखनमा, लेखकले प्रेरणाको विभिन्न स्रोतहरूको खोजी गर्न सक्दछ।
खैर, क्यालिग्राफीमा पनि प्रेरणाको उपस्थिति छ। यस व्यायाममा मार्गदर्शन गर्नका लागि तपाईले बहु सन्दर्भहरू फेला पार्न सक्नुहुन्छ। एक प्रेरणा उदाहरण हो कि तपाईं मोडेल गर्न सक्नुहुन्छ। तर यो याद गर्नुहोस् कि तपाइँ आफ्नो लेख्ने तरिकामा तपाइँको आफ्नै छाप छोड्नुहुन्छ। क्यालिग्राफी सँधै सुधार गर्न सकिन्छ। त्यो अवस्थामा, उद्देश्य निर्दिष्ट गर्न प्रयास गर्नुहोस् जुन तपाईं यस शिक्षणको साथ प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ। तपाईको लेखनमा कुन पक्ष परिपूर्ण हुन चाहनुहुन्छ? तपाईं यसलाई स्पष्ट र अधिक पढ्न योग्यको चाहानुहुन्छ।
यस व्यायाममा पेन्सिल प्रयोग गर्नुको एक लाभ यो हो कि गल्ती सच्याउन सम्भव छ रबर प्रयोग गर्दा। जे होस्, यो सृजनात्मक प्रक्रियामा अगाडि बढ्न सुविधाजनक छ पहिलो क्षणबाट उत्तम परिणामको खोजी नगरी। यो अनुभव हो जुन तपाइँलाई यो लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक प्राविधिक र शिक्षा प्रदान गर्दछ। यस तरिकाले, यदि तपाईले अभ्यास गर्नुभयो जुन तपाईले समयसँगै गर्नुभयो बचत गर्नुभयो भने, तपाईले आफ्नै विकास देख्न सक्नुहुनेछ।
यो सिक्ने प्रक्रिया सँधै क्रमिक हुन्छ। यसैले, पहिलो शब्दहरू लेख्नु अघि यो सिफारिश गरिन्छ कि तपाईं विभिन्न प्रकारका स्ट्रोकहरू बनाउनुहुन्छ। आराम गर्नुहोस् र यस कार्य योजनाको मजा लिनुहोस्। यी स्ट्रोकहरू तपाईले अक्षर र शब्द लेख्न प्रयोग गर्न लाग्नु भएको हो। तसर्थ, यो प्रारम्भिक चरणले अन्तिम गोलको दिशामा जानको लागि तपाईंलाई तयार गर्दछ। पाठमा प्रयोग गरिएको शैली यसको वरिपरि राख्नु पर्छ। पेन्सिलमा धेरै कडा नबस्नुहोस्, किनकि यसले तपाईलाई बढी थाक्नेछ। यो त्रुटिलाई अधिक प्रयासको आवश्यकता छ। लेखन प्रक्रियाको साथ प्रवाह गर्न प्रयास गर्नुहोस्।
वयस्क सुलेख कसरी सुधार गर्ने
वयस्क चरणमा यो सिकाई कसरी गर्ने? यो सिकाई, अरू जस्तो, सधैं निजीकृत हुन्छ। हुनसक्छ तपाईले स्वर वा व्यञ्जनको लेखनलाई पूर्ण बनाउन चाहानुहुन्छ, केहि खास कारणका लागि थप गाह्रो देखिन्छ। तपाईंले पहिले लेख्नुभएका विभिन्न पाठहरू पढ्नुहोस्। यस तरिकाबाट, तपाईं यो जानकारी निर्दिष्ट गर्न सक्नुहुनेछ तपाईंको शिक्षालाई एक दिशामा फोकस गर्न। अक्षरहरूको बिचमा भएको ख्याल राख्नुहोस्, किनकि प्रत्येकको आ-आफ्नै ठाउँ हुनुपर्छ। पालैपालो, शब्दहरूले दृश्य स्तरमा एकरूपता देखाउनुपर्दछ। सुलेखमा समन्वय र अनुपात महत्त्वपूर्ण छ।
आजकल धेरै वयस्कहरू कम्प्युटरमा अधिक लेख्छन् किनकि व्यावसायिक क्षेत्रको यो सामान्य चलन हो। तर हस्तलेखन कला पुनः प्राप्त गर्न यो सुविधाजनक छ। तपाईको दिनचर्याको जीवनमा यस तालिकासँग परिचित हुनुहोस्। उदाहरण को लागी, पत्रिका लेख्नुहोस्, कागज डायरी प्रयोग गर्नुहोस्, नोट लिनुहोस् जब तपाईं सम्मेलनमा जानुहुन्छ, व्हाइटबोर्डमा लेख्नुहोस्, वा साथीहरू र परिवारलाई पत्र पठाउनुहोस्। स्टेशनरी उत्पादनहरू, त्यसकारण, तपाईंको डेस्कमा धेरै महत्त्वपूर्ण छन्।
सुलेखको अभ्यासको बखत कसरी आफूलाई उत्प्रेरित गर्ने? वाक्यांशबाट प्रेरित हुनुहोस् जुन तपाईंको लागि भावनात्मक अर्थ राख्दछ। उदाहरण को लागी, तपाईंलाई मन पर्ने उपन्यास वा तपाईंको मनपर्ने चलचित्रको शीर्षक लेख्नुहोस्। यस तरीकाले तपाईले केवल लेखनमा मात्र ध्यान दिनुहुन्न तर जानकारीले के अभिव्यक्त गर्नुहुन्छ भनेर पनि। यस व्यायामलाई तपाईंको आफ्नै रूचिहरूसँग लिंक गर्नुहोस्। यदि तपाईं यात्रा गर्न मनपराउनु हुन्छ भने, यो शीर्षक तपाईंलाई बारम्बार लेख्न प्रेरित गर्दछ।
लेख्दा तपाईंको आसनको ख्याल राख्नुहोस् तर कागज पनि सही स्थितिमा राख्नुहोस्। यो सीधा हुनु पर्छ। व्यायाम संरक्षण गर्नका लागि उच्च गुणको कागज प्रयोग गर्नुहोस् जुन केही कारणका लागि बढी विशेष हो।
त्यहाँ बिभिन्न मद्दत संसाधनहरू छन् जुन तपाईंलाई यो सिक्ने प्रक्रियामा साथ दिन सक्दछन्। क्यालिग्राफी र सुन्दर पत्रहरू: दस भन्दा बढी आधुनिक शैलीमा क्यालिग्राफी र लेटरिंग नोटबुक पुस्तक लल्लुना लाना द्वारा लिखित कार्य हो। यस नोटबुकका पानाहरूले व्यावहारिक ढ in्गले आधुनिक क्यालिग्राफी सिक्न कुञ्जीहरू देखाउँछन्। यो प्रकाशन विशेष गरी शुरुआतीहरूको लागि उपयुक्त छ।
अक्षर अभ्यास गर्न दैनिक ठाउँ खोज्नुहोस्। तपाईंले यस लक्ष्यमा हरेक दिन धेरै समय खर्च गर्नुपर्दैन। केहि मिनेट को लागी यो व्यायाम गर्नुहोस् र यस दीर्घकालीन परियोजना मा लगातार रहनुहोस्।
हामी आशा गर्दछौं कि यो जानकारी तपाईंको लागि उपयोगी छ र तपाईंलाई मद्दत गर्दछ तपाईंको सुलेख सुधार्नुहोस् ताकि तपाईंसँग अझ सुन्दर हस्तलेखन छ.
लेखको पूर्ण मार्ग: गठन र अध्ययन » हाम्रो बारेमा » प्रशिक्षण » वयस्कहरूको लागि सुलेख
लिब्बी मार्टिनेज भन्यो
म 45 XNUMX बर्षको भएँ र म यो जान्न चाहान्छु कि मेरो लेखनलाई सुधार गर्न सम्भव छ कि छैन
लिब्बी मार्टिनेजलाई जवाफ दिनुहोस्
मेरो हस्तलेखन सधैं एक प्रकोप भएको छ र अब टेक्नोलोजीको साथ पनि मेरो हातको लेखन मुश्किलले लेख्न म सक्दो राम्रो गर्न सक्दछ किनकि यो चिन्ताजनक छ किनभने कसैले मलाई बुझ्दैन
म्यारानलाई जवाफ दिनुहोस्
बिट्रीज यूजेनिया प्राडा भन्यो
बीपीएफ बेसिक क्यालिग्राफी म्यानुअलले ग्यारेन्टी दिन्छ बोगोटा डीसीमा राम्रो हस्तलेखन र हिज्जेसँग लेख्न सिक्नु अघि र पछिको फेसबुकमा नमूनाहरू हेर्नुहोस्
बीट्रियाज यूजेनिया प्राडालाई जवाफ दिनुहोस्
बेट्रिज युजेनिया प्रा भन्यो
राम्रो हस्तलेखनको साथ बच्चाहरू र वयस्कहरूलाई लेख्न ग्यारेन्टी गर्ने विधि पत्ता लगाउन: ईन्टरनेटमा मार्क गर्नुहोस्: बीपीएफ कलिग्राफी बिट्रियाज युजेनिया प्रादा र त्यहाँ तपाईंले अविश्वसनीय पाउनुहुनेछ।
बिट्रीज यूजेनिया प्राडा
BEATRIZ EUGENIA PRA लाई जवाफ दिनुहोस्
कृपया हिज्जे गल्तीहरू जाँच गर्नुहोस्, कृपया। लगभग सुरुमा उनीहरू भन्छन्: »क्यालिग्राफी स्कूलहरूमा…» मा प्रगति भएको छ
किशोरावस्थामा पढ्ने benefits फाइदाहरू
विशेष शैक्षिक आवश्यकताहरू के के हुन्